Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo sheegay in uu doonayo sidii dalkiisa looga saari lahaa wadamada Mareykanku mamnuucay muwaadiniintooda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo sheegay in uu doonayo sidii dalkiisa looga saari lahaa wadamada Mareykanku mamnuucay muwaadiniintooda
February 11, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo sheegay in uu doonayo sidii dalkiisa looga saari lahaa wadamada Mareykanku mamnuucay muwaadiniintooda. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii dalkiisa looga saari lahaa liiska dalalka muwaadiniintooda laga mamnuucay soo galitaanka Mareykanka.
Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaan “Farmaajo” ayaa idaacada VOA-da wareysi uu siiyay Jimcadii ku sheegay in uu qorsheynayo sidaas.
“Waa masuuliyadayda in aan arrintan kala hadlo dowladda Mareykanka si ay ugu gudbiyaan fariintayada madaxweynaha iyo dowladdiisa in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwo wanaagsan oo shaqo badan,waxay qoysaskooda wax ku baraan gudaha Mareykanka. Marka waanu arkaynaa haddii uu badalo siyaasadda oo liiska ka saaro dadka Soomaaliyeed,” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Farmaajo waxa uu haystaa dhalashada Mareykanka waxaana uu muddo badan noloshiisa ku qaatay gudaha Mareykanka, gaar ahaan magaalada waqooyi ee Buffalo.
8-dii bishaan oo ku beegnayd Arbacadii lasoo dhaafay ayaa baarlamaanka Soomaaliya u doorteen madaxweynaha cusub ee dalka, waxaana la filayaan maalmaha soo aadan in uu xafiiska Villa Soomaaliya la wareego.
Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka ku jira liiska go’aan uu bishii hore soo-saaray Madaxweyne Donald Trump oo uu muwaadiniinta kasoo jeeda wadamadaas kaga mamnuucayo in ay soo galaan gudaha Mareykanka.
January 4, 2017 Ugu yaraan saddex kamid ah ilaalada Soomaalida ah ee QM oo ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Bosaso-(Puntland Mirror) Up to seven foreign fishing vessels were reported to have recently arrived in the coastal town of Bosaso in Bari region. The fishing vessels have received permission from the Puntland government to go [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka warfaafinta dowlada federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM ay burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyada al-Shabaab. Wasiir Maxamed Cabdi Maareeye ayaa sheegay howlgal wadajir ah oo ay sameeyeen labada [...]